Warar - Ilaaliyaha shaashadda ayaa ku anfacaya adiga !!!
Muxuu yahay dareenkaaga haddii shaashaddaada la xoqay oo la jabiyay markii taleefanka gacanta hoos u dhaco ?? Maxaad sameyn doontaa markaa?
1. Ma jeceshahay inaad qarash gareyso USD800-1000 si aad u iibsato mid cusub oo taleefan gacmeed ah? Gaar ahaan taleefanka asalka ah ee kaliya shirkad kula ah kaliya nus ama hal sano?
2. Ama ku bixinaya USD60-100 dayactirka ama beddelka taleefanka gacanta?
Horumarinta tikniyoolajiyadda, taleefannada casriga ah ama aaladaha kale ayaa lagu soo koobay shaashadda taabashada oo ah qayb joogto ah. Si fiican uma shaqeyn doonto haddii shaashadda jabto ama taabashada taabashada ay xun tahay ka dib marka la xoqo.
In kasta oo shaashadaha ay ka adkeysi badan yihiin wixii ay ahaan jireen, weli wey sii joogteyn karaan dildilaaca iyo xagashada. Dhaawaca taleefanka badanaa waa kharashka isticmaalka maalin kasta. Waxay dhici kartaa markii la garaaco ama cadaadis sarreeya oo ka soo baxa shaashaddaada, ama waxaad ka heli kartaa dillaac qalabka ka dib markii aad si kama 'ah u daadiso. Shilalku waxay dhacaan markaad qalab u qaaddo meel kasta oo aad tagi doonto.
Haddii aadan rabin inaad hesho dhibaatooyin iyo kharash badan, habka ugu caqliga badan wuxuu ku helayaa difaac shaashadda qalabka. Ilaaliyaha shaashadda caadiga ah wuxuu badanaa ku kacaa $ 10 iyo $ 20, waxayna noqon doontaa maalgashi wanaagsan.
Qofka caadiga ahi ma u baahan yahay ilaaliyaha shaashadda qalabkooda? Faa'iidada ilaaliyaha shaashadda ayaa ah inay bixiso caymis dheeraad ah haddii shil dhaco. Waad xoqin kartaa ilaaliyaha shaashadda ka dibna ku beddel qiimo jaban.
Ugu dambeyntiina, adiga ayay kugu xiran tahay inaad go'aan ka gaarto haddii aad u baahan tahay ilaaliye shaashad ah. Waxay kuxirantahay xaaladaada, waxay noqon kartaa iibsi caqli badan - qaasatan hadii aadan haysan lacag aad kubadasho ama kuhesho shaashadda hal mar.
Horumarinta shaashadda shaashadda, waxaa jira noocyo badan oo hawlo ah oo ka dhacay muraayadda khafiifka ah, ama qalabka kale sida PMMA, PET iwm sida nalka buluugga ka soo horjeedka ah, nal-dhalaalka, asturnaanta, bakteeriyada lidka ku ah, iwm. samee filimka xanaaqa ama shaashadda shaashadda ayaa ku habboon sidoo sidoo kale taleefanka gacanta, suufka, kaniiniga, laptop-ka, smartwatch, go pro, kaamirada, iyo muraayadaha iPhone, Samsung, Google, Huawei, Mi, Vivo, Oppo, Motorola, shark madow , iwm iyo shaashadda ilaaliyaha gaariga, mashiinka, iwm.